Tan iyo war abuurashadoodii ee camera, dadka bilowday in ay sawiro in ay qabsadaan daqiiqado ay qaali jir ah, si ay mar kale iyo mar kale ay xusuusan karaan dhacdooyinka qiimo kuwa. Mararka inkastoo sawir uu ahaa mid kooban in camera kaliya, balse maanta la hordhaca ah ee sawir casriga ah oo aan hadda ku koobnayn oo kaliya kaamirooyinka. Hadda ma waxaad arki doontaa dadka siday camera DSLR ah waqtiga oo dhan laakiin way arki doontaa ay saarnaayeen oo isticmaalaya casriga ah ee sawirrada qabsaday. Si kastaba ha ahaatee, dhibaatada ugu weyn ee la sawiro laga qaaday ee casriga ah waa xusuusta. Maxaa yeelay, Qalabka telefoonada gacanta helay xasuusta kooban iyo barta gaar ah aad ka maqnaan doona meel ay qaataan ama ku kaydsan sawiro cusub. Ka sokow, waxa kale oo aad waayi kartaa oo dhan sawiro aad la tuubada qaldan ama virus.
Si aad uga takhalusi dhibaatooyinkan, gurmad waa mid aad u muhiim ah in sawir. Maxaa yeelay, haddii aad xoojiyaa sawiro aad markaas wax walba oo dhaca aad had iyo jeer aad sawiro lumay ka files gurmad ka heli kartaa dib. Dad badan ma yaqaanaan sida loo sawiro gurmad on Samsung Galaxy S3 / S4 / S5 iyo qalab kale. Hoos waxaad heli kartaa tilmaamo cad oo ku saabsan sida loo raad raac Samsung sawiro si aad haysan kartid xasuusta qaali ah oo cusub. .
Qaybta 1. kaabta Samsung Photos in PC la USB ah Cable Qaybta 2. Photos kaabta on Samsung Galaxy S4 / S3 / S2 iyo More in PC la Software Qaybta 3. Top 5 Android Apps in dib Pictures ka Samsung Galaxy S3 / S4 / S2 , iwm si Cloud
Qaybta 1. kaabta Samsung Photos in PC la Cable USB ah
Nooca Android furan ka dhigayaa kuu haboon in sawiro gurmad aad Samsung qalab si PC. Uma baahnid in aad si loo soo dajiyo kasta oo qalab pary saddexaad. Just aad kaligaa.
Tallaabada 1. Buur qalab Samsung oo ah drive dibadda adag.
Tallaabada 2. your computer ka heli drive dibadda adag oo la furo. Dhammaan fayl iyo files kaarka SD waxaa halkaas iska nabadgeliyey.
Tallaabada 3. Guji folder DCIM iyo nuqul ah sawiro aad qaadatay iyo paste in folder wax on your computer. Haddii aad qabto folder wax sawir kale, waxaad ka heli kartaa oo aad iyaga aad nuqulka in kombiyuutarka.
Mid aad u fudud, miyaanay ahayn? Si kastaba ha ahaatee, aad qabtid in ay la kulmaan xaqiiqda ah in ay jiraan tahay fayl badan oo ku saabsan kaarka SD ah. Waa yara adag tahay si aad u hesho dhammaan fayl sawir DCIM mooyee. Sidaa darteed, si ay gurmad oo dhan photos Samsung, laga yaabo inaad kaalmo ka qalab dhinac saddexaad ah, sida Samsung Kies weydiiso.
Qaybta 2. Photos kaabta on Samsung Galaxy S4 / S3 / S2 oo dheeraad ah si ay u PC la Software
Jidka 1. Isticmaal Samsung Kies in sawiro gurmad ka Samsung Galaxy S2 / S3 / S4, iwm
Si gurmad Samsung sawiro qalab on PC aad u baahan tahay in ay Kies Software lagu rakibay on your pc. Waxaad ka heli kartaa software ka website-ka Samsung ee lacag la'aan ah. Kies taageertaa dhammaan qalabka Samsung iyo sawiro si fudud gurmad aad karto ee aad pc adigoo isticmaalaya Kies. Faahfaahinta ilaa taageero waa la wada hadlay hoos ku qoran talaabo talaabo ah.
Tallaabada 1. Download iyo rakibi Kies aad kombuutarka ka website-ka Samsung
Tallaabada 2. Marka aad samaysay rakibo, haatan waxaad in ay ku xidhmaan qalab Samsung la PC ah iyadoo la isticmaalayo ah cable xogta USB. Connect dhamaadka yar oo cable ee ku saabsan qalabka Samsung sida ku cad image dhinaca midig, iyo darafkiisa kale inta cable ee dekedda USB PC plugin.
Marka qalab ku xiran yahay si ay PC ka dibna dareewalka waxaa la rakibi doonaa si toos ah aad kombuutarka. Wargelin ka muuqan doontaa qalab Samsung sida image hoose.
Tallaabada 3. Tubada ku wargelin iyo sax ku Device Media (MTP) ikhtiyaarka ah oo ku saabsan dejinta sida ku cad image kor ku xusan.
Tallaabada 4. Ka dib marka aad samaysay si guul ah, waxaad u baahan tahay in la siiyo ogolaansho Debugging USB on qalab aad. Si taas loo sameeyo, geli Settings on qalab aad ka dibna tag Xulashada Device.
Waxaad arki doontaa fursadaha sida image bidixdiisa. Sax mark on doorasho Debugging USB (Red on image ku calaamadsan). Marka aad samaysay in aad diyaar u tahay in ay maareeyaan qalab Samsung aad kombuutarka.
Tallaabada 5. Run Kies aad kombuutarka iyo shaashadda soo socda ka muuqan doontaa in aad PC-
Tallaabada 6. Sida aad kor ku aragto sawirka, guji Back up / Celinta iyo ka mid ah liiska ay doortaan Photos. Markaas guji Back u p sare ee shaashadda oo dhan sawiro aad la taageeray doonaa ilaa aad PC. Waxaa waxaad arki doontaa doorasho kala duwan oo waxaad yeelan doontaa in ay doortaan 'Samsung Account'.
Jidka 2. Isticmaal Wondershare MobileGo for Android in gurmad sawiro ka Samsung S3 / S4 / S2 oo dheeraad ah
Inkastoo Samsung Kies aad u saamaxaaya in ay sawiro gurmad, waxa uu leeyahay khasaaro. Waxa uusan si aad u wanaagsan ee la xidhiidha. Haddii aad qabto isticmaali Samsung Kies, waxa kale oo aad la kulmi laga yaabaa in xaaladda sida meesha ay ku hayaa xira qalab aad, laakiin aysan waxba dhicin. Xaaladdan oo kale, waxaa laga yaabaa inaad doonayso inaad hesho kale oo ay Samsung Kies oo aan samayn karo fiican.
Nasiib wanaag, halkan waa xaq hal - Wondershare MobileGo for Android (Windows) ama Wondershare MobileGo for Android Pro (Mac) . Labada qeybood oo fursad kuu siinayaan in Samsung photos gurmad fudayd.
Fiiro gaar ah: Tan iyo version Mac u shaqeeyo si la mid ah sida version Windows ma, waxaan halkan oo keliya idin tusin sida loo sameeyo la version Windows.
Tallaabada 1. Download version saxda on your computer oo ku xidh.
Tallaabada 2. Run software iyo in computer ku xidhi qalab Samsung la cable USB ama via WiFi (WiFi waa la heli karaa iyadoo version Windows ah.)
Tallaabada 3. In uu furmo suuqa hoose, guji -riix One Backu p inay soo qaadaan suuqa kala gurmad. Sida aad ka arki, dhammaan faylasha in la taageeray kartaa yihiin saxday. Iyaga Uncheck iyo sax Photos. Markaas, guji Back Up.
Tallaabada 4. Markaas, sawiro lagu taageeray doonaa in kombiyuutarka. Waxaad ku eegaan karo sawirada mar walba.
Qaybta 3. Top 5 Android Apps in dib Pictures ka Samsung Galaxy S3 / S4 / S2, iwm si Cloud
Si kale oo taageero ilaa sawiro aad la isticmaalayo adeega daruur oo ay taageerayaan ku dhowaad dhammaan qalabka ugu dambeeyay ee Samsung. Si aad u samaysid iyada, waxaad u baahan tahay inaad iska diiwaan bixiye kasta oo adeeg kaas oo bixiya kaydinta daruur oo kale oo ay leeyihiin qorshe wanaagsan xogta ku hadalka taleefanka gacanta. Qaar ka mid ah adeeg bixiyayaasha daruur caanka ah ee Tenth Google Drive, WordPress, MySpace, Xataa Buur Siinay nafteedu waxay bixisaa Samsung daruur u isticmaala isagoo account Samsung ah kaydinta.
Kaabta G Cloud 4.6 Free 10M Android 2.2 & up
My Pro kaabta 4.2 $4.99 3.5 Android 1.6 iyo ilaa
Google + 4.2 Free Kala duwan leh qalab Kala duwan leh qalab
Mobile kaabta & Soo Celinta 4.2 Free 5.6m Android 2.2 iyo ilaa
Shoebox- Photo kaabta Cloud 4.5 Free Kala duwan leh qalab Kala duwan leh qalab
Kaabta 1. G Cloud
Kaabta G Cloud waa tan sarreysa qiimeeyo codsiga gurmad ee Google Play Store. Waxaa la soo bixi badan 1million jeer dukaanka play. Waa arrin aad u sahlan in ay isticmaalaan oo kaliya 2 tallaabooyinka user dib kartaa sawiro uu galay server daruur this app ee. Waxa ugu fiican ee ku saabsan app tani ay tahay, waa xor ah oo dadka isticmaala ku. Waa wax iska fudud user interface u app ugu sarreeya dib loo qiimeeyo kor u sameeyey.
Google+ soo bixi ugu sareeya dib app dukaanka play ah. Waxaa la soo bixi in ka badan 10 milyan oo isticmaala dukaanka play ah. App Tani syncs oo dhan muuqaalada Google + warsan si toos ah wixii tan la soo bixi ugu sareeya dib codsi dukaanka play ah. Wuxuu xambaarsan rating wanaagsan sidoo. Wuxuu xambaarsan yahay dhibic rating ka mid ah 4.2 ka badan hal milyan oo ratings u helay. App Tani si toos ah u guraan karaa tiirarkii koox oo si ku taariikhaysan.
Waxaad samayn kartaa markii u koombiyuutarka iyo xaddido tirada images in la uploaded. Sidoo kale waxaad sameyn kartaa si toos ah resize si images yihiin shrinked ka hor kuwa uploaded in daruurtii oo badbaadin doonaa xogta aad tan iyo sanamyadii waxaa ka mid ah baaxadda weyn oo dhan qalabka ugu dambeeyay.
Download Google + ka Google Play Store >>
Mobile gurmad & Soo Celinta ka mid yahay liiska sawiro caan ah oo gurmad ah barnaamijyadooda 4aad iyo waxuu xanbaarsan yahay score rating ee 4.2 ah. App Tani waa arrin cusub oo la barbar dhigay dadka kale ee kor ku xusan oo waxaa la soo bixi badan 500k jeer tan iyo markii la bilaabay. Software antivirus Popular avast dhisay app this. Waxaa dib kartaa ilaa ku dhowaad wax walba oo ku saabsan telefoonka ka photos, xiriirada, si SMS, videos iwm si daruurtii. Waxaad sidoo kale balan kartaa maalinta iyo waqtiga taageerto ilaa sawiro qalab Samsung on app this.
5. Shoebox - Photo kaabta Cloud
Shoebox waa sawir kale oo gurmad app kaas oo bixiya kaydinta daruur dadka isticmaala ay. Waxay heshay hal dhibic rating 4.5 ah iyo waa cusub oo dhan codsiyada gurmad kor ku xusan. Waxaa si toos ah Uploads sawiro ku saabsan kaydinta daruur ay sida ugu dhakhsaha badan ee aad qaado sawiro iyo sababta oo ah taasi waa mid aad u badbaado iyo ammaan iyo aad had iyo jeer meel kasta oo go ka arki kartaa sawiradaada. Waxaa uu kaydiyaa photos dhex sirta taas oo macnaheedu yahay photos yihiin nabad iyo xasilooni. Waxay bixisaa boos aan xad lahayn u gurmad sawir oo kala images oo ku kaydi si ah.
Download Shoebox - Photo kaabta Cloud ka Google Play Store >>
A hanuun Full on Isticmaal Kies in Maamul Files
Ku rakib, uninstall, Update Kies on PC
Faylal ay kala soo wareegeen iPad in Samsung
> Resource > Samsung > 3 Hababka in kaabta Samsung Photos iyo Hayso Memory qiimo Fresh